एडलर रिसोर्ट्स रूस मा आफ्नो बिदा खर्च गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मानिन्छ छन्। र विभिन्न कारणहरू धेरै छन्। एडलर (ग्रेटर सोची नजिकै) लामो पर्यटकहरु लाखौं लोकप्रिय भएको र राम्रो कारणले भएको छ। यो एक लामो समय को लागि यो सम्झना गर्न समय खर्च गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी बारेमा थप बताउन पर्छ।
हामी रिसोर्ट्स एडलर, तपाईं Krasnaya Polyana बारेमा बताउन आवश्यक पहिलो कुरा कुरा भने। यो साँच्चै मनोरञ्जनको लागि राम्रो स्थान छ। Krasnaya Polyana - स्वर्ग को रूसी कुना, जो अन्य स्की रिसोर्ट्स संग तुलना गर्न सकिन्छ। एडलर मात्र होइन कारण सुरम्य विचरण र हलचल नाइटलाइफ, तर पनि कारण Krasnaya Polyana गर्न लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।
र यो ठाउँमा हामी ओलम्पिक र भाग खर्च मा Paralympic खेल , 2014 गत। अपस्ट्रिम पी - रातो Glade एडलर को केन्द्र देखि 40 कि स्थित। Mzimta। द्वारा कार, बस वा रेल "Swallow" - को रिसोर्ट प्राप्त गर्न तरिका को एक किसिम हुन सक्छ। एक घन्टा भन्दा यो सुरम्य स्थान प्राप्त गर्न लिन थियो। खैर, गाउँमा समुद्र स्तर माथि 0.55 मीटर को एक उचाइ मा स्थित छ। यो तपाईं पहाड ढलान, नम ताजा हावा र उच्च हिमपात आवरण आनन्द उठाउन सक्छौं कि यहाँ छ।
को पर्यटकहरु अनुसार, स्की रिसोर्ट्स एडलर (Krasnaya Polyana, रोजा Khutor, Gorki-शहर आदि) शानदार छुट्टी गन्तव्य, तर सस्तो छैन। ज्यादातर five- र चार तारा - विभिन्न होटल र होटल को धेरै छ। उदाहरणका लागि, एक हप्ताको लागि एक गेस्ट हाउस मा एक डबल कोठा "ग्रेस परियोजना" 77.000 rubles (को हिउँदमा चुचुरोमा सिजन मा,) खर्च हुनेछ। र यो हामी सबै भन्दा राम्रो बजेट विकल्प भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आवास एक हजार र प्रति दिन आधा बारेमा खर्च हुनेछ जहाँ स्थानहरू पक्कै हो। तर त्यहाँ छ, को पाठ्यक्रम साझा कोठा, बजेट मा बेड, तर साँच्चै आरामदायी छैन समाधान हो। तर, मान्छे को वित्तीय मुद्दा मतलब छैन, एडलर को स्की रिसोर्ट्स भ्रमण गर्न चाहने भने, यो जान लायक छ। तपाईं पनि Krasnaya Polyana मा एक विला भाडामा सक्नुहुन्छ - सात दिन को लागि, यो बारेमा आधा एक लाख rubles खर्च हुनेछ। छैन एक व्यक्ति, पाठ्यक्रम, को विला मा मान्छे को कुनै पनि नम्बर समायोजित गर्न सक्छन्, तर उचित सीमा (बेड संख्या निर्धारण गरे जुन) भित्र।
स्की स्तरका मूल्यहरु यद्यपि, एडलर मा रिसोर्ट्स, तर यहाँ खर्च गर्न समय ठूलो सफलता, तथापि, पूर्व-रिजर्व असीमित कार्ड वा पर्स एक तल बिना हुन सक्छ। एक पूर्ण स्वादिष्ट यहाँ खानाको 500 भन्दा बढी rubles खर्च हुनेछ - यो तयार हुनुपर्छ। तर Krasnaya मा Polyana जहाँ उत्पादन, तल रूपमा लगभग उस्तै शहरमा पसलहरूमा र सुविधा स्टोर प्रशस्त छ।
त्यसैले, कसरी आफ्नो छुट्टी यहाँ खर्च गर्न? एडलर - यसको विविधता प्रसन्न तुल्याउने रिसोर्ट। यहाँ जसको कुल लम्बाइ 39 किलोमिटर छ पथ, प्रशस्त छ। लिफ्टहरु समुद्र स्तर माथि बारेमा 2300 मीटर को एक उचाइ मानिसहरूलाई उचाल्न! यो एक दिन स्की प्रति दिन लगभग 1600 rubles पारित लायक छ।
"Gazprom लौरा" मा रहन परिवारको लागि सिफारिस गरियो। जहाँ तपाईं साँझ जान छ बाहेक त्यहाँ सानो र मध्यम ढलान को ट्रेल्स प्रदान गर्दछ। वयस्कहरूको लागि स्की पास लागत हप्तादिन मा हजार बारेमा rubles बराबर छ।
एक जटिल, जटिलता विभिन्न स्तर को खुसी आगंतुकों ट्रेल्स - थप "पहाड खेलाची" जस्तै धेरै। सामान्य, skis, snowboards र वातावरण खातिर, र धेरै मा एडलर आउँछन्। मात्र कुरा दुखी camper रहन सक्छौं कि (र एक साना बजेट आएका), त्यसैले मूल्यहरु छ - रिसोर्ट सबै भन्दा राम्रो समीक्षा प्राप्त गर्दछ। त्यसैले, Krasnaya Polyana जाँदै, एक सानो थप आर्थिक ल्याउन गर्नुपर्छ - तिनीहरूले सजिला मा आउनुहोस्।
एडलर को रिसोर्ट शहर आगन्तुकहरूलाई को विशाल बहुमत, जाने पहिलो कुरा हो , ओलम्पिक पार्क को शीतकालीन खेल आयोजित थिए जहाँ ठाउँमा हेर्न। धेरै ट्याक्सी प्लाई गर्न केन्द्र देखि - बस यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्। ओलम्पिक पार्क साथै तपाईं स्टेडियमों, torches र ट्रयाक "सूत्र 1" मात्र होइन पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ। बेन्चहरूले र सुन्दर समुद्री तट संग शान्त र शान्त विचरण देखि पनि केही मिनेट 'पैदल। साधारणतया सबै पर्यटकहरूले केन्द्रीय समुद्र तट जाने, तर यहाँ पानी धेरै calmer र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, शान्त छ। धेरै मानिसहरू प्रश्न चिन्तित हुनुहुन्छ: "? अनि भुक्तानी प्राप्त गर्न प्रवेश" ओलम्पिक पार्क मा, कुनै, समुद्र तट प्राप्त गर्न सक्छन् कुनै पनि मानिस, र यो बिल्कुल मुक्त छ - उत्तर धेरै खुसी हुनेछ।
यो रिसोर्ट शहर
अस्पताल-रिसोर्ट जटिल, भनिन्छ जो "Adlerkurort" को यस क्षेत्रमा। विभिन्न होटल, होटल, क्याफे, बारहरू, मनोरञ्जन र मनोरञ्जन केन्द्र, रेस्टुरेन्ट, रात्रि क्लब को एक विशाल संख्या छ ... अनि यो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ यो स्थानमा छ के को एउटा सानो सूची छ! त्यहाँ पूल पनि पौडिरहेका, एक dolphinarium, पानी पार्क "Amfibius", खेल को मैदानों, टेनिस कोर्ट, एक गेंदबाजी एली, बच्चाहरु र रिसोर्ट polyclinic लागि एक शानदार शहर रूपमा परिचित छन्। जहाँ रहन र एडलर शहर भ्रमण निर्णय? रिसोर्ट "डल्फिन" - सबैभन्दा लोकप्रिय होटल को एक महान विकल्प हुन सक्छ। वा "वसन्त" - शहर मा सबै भन्दा महत जटिल, लामो समय को लागि अवस्थित। म एडलर मा होटल सबै साधारण स्तर र आवश्यकताहरू पूरा भनेर भन्न पर्छ। जो कोहीले पनि सबैभन्दा परिष्कृत पर्यटक सेवा गुणस्तर सन्तुष्ट हुनेछ।
धेरै रूस सबैभन्दा महंगा शहर सोची छ भन्ने विश्वास गर्छन्। रिसोर्टमा एडलर, पाठ्यक्रम, धेरै कम मूल्य फरक छैन। तर, एक लागत प्रभावी, कम लागत विकल्प मनोरञ्जन धेरै वास्तविक फेला। पहिले, मुक्त मनोरञ्जन प्रशस्त छ। रिसोर्टमा एडलर, देखाउन जो आधुनिक शहर राति निन्द्रा छैन चित्र, हाल विभिन्न चाडहरूमा, प्रतियोगिताहरु र संगीत को लागि सबै भन्दा सफल स्थल हो। उनीहरूले भ्रमण गर्न पाप भनेर धेरै घटनाहरु, शुल्क को अक्सर मुक्त छन्। सन्दर्भमा आवास - केन्द्र देखि प्रति दिन 500-1000 rubles को लागि, तपाईं एक शान्त 10-15 मिनेट मा स्थित एक राम्रो गेस्ट हाउस पाउन सक्नुहुन्छ हिंड्न। यी पनि, प्रशस्त - यो निजी वा साझा भान्सा संग एक विकल्प खोज्न राम्रो छ। सुपरमार्केट र बजार (विशेष गरी त्यहाँ) मा दुवै - एडलर सस्ता मा उत्पादन देखि। तपाईं आफैलाई सजिलै तयार सकिन्छ, र यो बजेट मा मारा जा गर्नुपर्छ।
रिसोर्ट्स एडलर यहाँ जवान मान्छे को लागि मनोरञ्जन त्यहाँ छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा र यात्राहरु सबै प्रकारका प्रेम गर्ने पुरानो मान्छे, लागि राम्रो हो। थप र एडलर देखि केही किलोमिटर निहित जो अब्खाजिया, जान - यो एक पत्थर दुई चरा मार्न सोची आइपुगेपछि, सम्भव छ। शान्त, सुन्दर प्रकृति र सफा हावा, जो प्रसिद्ध रक्सी र chacha किन्न सस्ता हुन सक्छ संग शान्त ठाउँ। तपाईं अझै पनि धेरै छन् जो को सोची शानदार झरने, पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ, एडलर पार्क "दक्षिणी संस्कृति" भ्रमण र अन्य सुंदर स्थलहरू हिंड्न।
सामान्य मा, एडलर - एक अविस्मरणीय रहन को लागि सही ठाँउ हो। बजेट मा यात्रा प्रशंसक र लक्जरी मा नुहाउने गर्न accustomed छन् मानिसहरूलाई अपील गर्नेछ जो भिन्नताहरूलाई को रिसोर्ट।
घरेलु बन्दोबस्त "सेतो Dew", नोवोसिबिर्स्क: समीक्षा, फोटो
Belozersk आकर्षण: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
पुरानो Arbat। को Arbat गेट क्षेत्र मा मेट्रो स्टेशन
खनिज मास्को क्षेत्र। खानी र उत्खनन (मास्को क्षेत्र)
अधिकृत राजधानी सम्भावित लेखा प्रविष्टिहरू
प्रसब समयमा यस्तो महत्त्वपूर्ण एनेस्थेसिया
"Dolce Vita" (Vityazevo) - Anapa मा सबै भन्दा राम्रो गेस्ट हाउस
गोली लेनोभो Miix 3: सुविधा र समीक्षा। लेनोभो Miix 3: समस्याहरू अद्यावधिक पछि
कसरी "संपर्क" जान प्रतिबन्ध लगाइएको वा अवरुद्ध भने?